Imfashini | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
I-FlN Flaring, jackets ezantsi: isishwankathelo, iimodeli kunye nokuphononongwa
Impahla ekumgangatho ophezulu iya kuhlala ifumana umthengi wayo. Kwaye xa kufikwa kwizinto ezivela kwilizwe elidumileyo laseFinland uphawu iFINN FLARE, emva koko akunakubakho kuthandabuza - ukuthenga into enjalo ...
Uzahlulahlula njani i-jean yabasetyhini kwabesilisa? Iingcebiso zeengcali
Bobabini abesilisa nabasetyhini bayazithanda iijini. Wonke umntu uya kuvumelana nale ngxelo. Kuya kubonakala ngathi ezi mpahla zi-unisex, kuba zibukeka zintle kuzo zombini izini. Nangona kunjalo, oku akuyonyani. Inqununu ...
Vitacci - izicathulo eziphakamileyo eziphezulu zefashoni
Baninzi abavelisi bezihlangu namhlanje. Phakathi kwabo iVitacci iyakwazi ukwahlulahlula. Izihlangu zolu hlobo ziyahlukaniswa bubuhle, ukuqaqamba nobuhle. Apha awuyi kufumana kuphela iibhuthi ze-chic ezinesithende, kodwa ...
Impahla yabantwana "I-Lappy Kids": ukuphononongwa, amaxabiso, inkcazo
Bonke abazali bakhumbula kakuhle ukuba umdla, kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukuhamba ngokukhuselekileyo kosana lwabo kuqala ngokukhetha iimpahla ezifanelekileyo. Kwaye ukuba kwixesha elifudumeleyo lo mbandela awukho buhlungu kakhulu, ...
Itshati Yabaninzi Beempahla Zabesifazane: iRussia, iUSA, Italiya, China
Onke amantombazana ayakuthanda ukuthenga, kodwa kukho iimeko xa olu lonwabo luba yinto engafikelelekiyo. Xa kufuneka usebenze kakhulu okanye uhlale nomntwana, akukho xesha lakho, kwaye oku ...
"Chanel" - isuti yamanenekazi kwaye azithembile
Ngomqondo weklasikhi, isuti yabasetyhini yeChanel sisiqwenga-mabini. Inesiketi kunye nebhatyi. Umyili odumileyo wathi ukhetho olufanelekileyo kufuneka ludibanise amadoda nabasetyhini ...
Impahla yentloko yamadoda: iintlobo kunye nenkcazo. Ungayikhetha njani umnqwazi yendoda
Iminqwazi yamadoda ibisetyenziselwa injongo yayo ukusukela kumaxesha amandulo. Enkosi kubo, abameli besini esomeleleyo babalekile kwimozulu ebandayo, ubushushu kunye nezinye izinto zomoya. Okwangoku, iminqwazi ibe ...
Loafers: yintoni kwaye kufuneka banxibe ntoni ngayo
Ifashoni itshintsha ngokukhawuleza kangangokuba ngamanye amaxesha kunzima ukugcina umkhondo wazo zonke iimveliso zayo ezintsha. Kule nqaku, siza kuthetha ngeenkcukacha ze-wardrobe ezinjengezonka: ziyintoni kwaye zilungele ntoni ...
Ezantsi iJekethi Miss Fofo: indlela onokuthi ukhethe ngayo, unonophele kwaye uphonononge umgangatho
Ubusika lixesha leziganeko zomlingo kunye nemisebenzi enomdla. Ukuhamba, ukuskiya, iifoto zasebusika, kunye nokuya kwivenkile ekhephu elimhlophe kuyonwabisa. Kwaye oku kuyonwabisa ...
Ucoceko lwezihlangu kunye neengubo. Ukunakekelwa kwempahla kunye nezihlangu
Ucoceko kudala luyinxalenye yomxholo wobuhle. Ubuso, umzimba, ikhaya, impahla kunye nezihlangu ayisiyonto ingaqhelekanga - ezi ziinkqubo ezilula zemihla ngemihla ezinceda ukugcina impilo. NONE
Izambatho "Faberlik": uphononongo lwabathengi
Izambatho ziyimpahla ye-wardrobe, ngaphandle kwayo akukho mfazi onokucinga ngobomi. Into ephambili ayikuko ukwenza iimpazamo xa uthenga. Izinto kufuneka zibe zintle kwaye zikumgangatho ophezulu. Hlawula eyakho ...
Ungayikhetha njani isayizi yesitokhwe ukuze ikhangeleke inomdla
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 14.11.2019
Ekuboneni kokuqala, kubonakala ngathi akukho nto inzima ekukhetheni iithayithi. Uninzi lwamantombazana luqinisekile ukuba luyayazi indlela yokukhetha ubungakanani obufanelekileyo besitokhwe. Unokukhetha njani ukuba kungafuneki rhoqo ...
Ingubo eguquliweyo: uza kunxiba ntoni? Iingcebiso ngokubanzi.
Isitayile sokungaphezu kwamandla yindlela elula nefanelekileyo yokunxiba kwabasetyhini abakhatheleyo ukuzigcina bekwimida ethile. Uhlobo lwefashoni kukunxiba okuguqulweyo, ngokungathi kuthathwe egxalabeni lomnye umntu. Indawo ekhethekileyo…
I-BASK - iibhatyi ezantsi zabafazi kunye namadoda: uphononongo
Iimeko zemozulu kwiplanethi enkulu yahlukile kuyo yonke indawo, kwaye kwenye indawo abantu kufuneka baziqhelanise nobushushu obunganyamezelekiyo, kwindawo ethile ukuze bafumane ukunyikima, kunye nendawo yokumelana namaqondo obushushu asezantsi, ingqele kunye nenkanyamba ...
Yintoni onokuyinxiba ngegrey ingubo? Iingcebiso zefashoni
Ngokwesiko, ingwevu ibonwa njengenye indlela ethambileyo yokuthabatha ubumnyama obumnyama. Ingena ngokugqibeleleyo kwiofisi, ukubukeka, okusesikweni kunye nokubukeka kwezemidlalo. Konke kuxhomekeke kwindlela yokudlala kunye nemilo kunye nezinto ezihambelanayo. ...
Ungayikhetha njani ipendenti yabathandi ababini (ifoto)?
Ngaba isibhengezo sothando singabhalwa ngesiqwenga esibonakala siqhelekileyo sobucwebe? Ewe, ukuba isisithambiso sezithandani ezibini, ezikhethwe ngumntu ofuna ukuvuma umphefumlo wakhe kunye nehlabathi ...
Yintoni onokuyinika i-30 kumhlobo: khetha esona sipho silungileyo
Iminyaka engama-30 sisikhumbuzo esibi. Nangona kunjalo, ayisiyiyo iminyaka yokuba intombazana ifihle, kwaye ke iholide ihlala ibhiyozelwa kwinqanaba elikhulu. Ukuba umenyiwe kumbhiyozo onje, ke ...
Iindondo zamehlo zekati ezimangalisayo
Izibuko zelanga "iliso lekati" ziye zathandwa ukusukela kwiminyaka ebalaseleyo kaMarilyn Monroe. Kude kube ngoku, olu hlobo lwesakhelo luhlala lukhoyo phakathi kwabafazi kwihlabathi liphela. Emva kwayo yonke loo nto, nganye ...
Niqab: yintoni? Inkcazo, ifoto
AmaSilamsi akholelwa kakhulu kunqulo. Abameli benkcubeko yamaSilamsi babambelela ngokungqongqo kwimigaqo nemigaqo yenkolo. Le mithetho ibandakanya ukunyanzelwa okunxitywe ngabafazi beminqwazi abagquma iinwele zabo. Enye yezinto zemveli kwewadi yeArabia ...
Imibuzo ye-78 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,958.